Gaambiyyaatti Dolaarri Miiliyoona 11 ol achi buteen isaa dhabame. });
Gaambiyyaatti Dolaarri Miiliyoona 11 ol achi buteen isaa dhabame.
Pireezidaandiin Gambiyaa duraanii Yaahyaa Jaameen erga baqatanii booda dolaarri Ameerikaa miliyoona 11 ol kaaznaa biyyatti keessaa achi buuteen isaa akka dhabamee gorsaan pireezidaantii Haaraa biyyatti Maay Ahmad Fattiin dubbatan.
Jaahyaan Jaameen wayita biyyatti gadlakkisanii bahan fudhachuu akka hin ollee himamaa jira jedhameera.
Akka gorsaa pireezidaantichaattii Ogeeyyoonni faayinaansi maallaqni hanga qisaasamee akka qulquleessaa akka jiran himaniru.
Pireezidaantiin duraanii Mr. Jaameen baqachuusaaniin walqabatee,konkoolaatoota ammayya'aa fi meeshaalee ciccimoo xiyyaaraa fe'uumsaa Chaadiin biyyattirraa akka miliquu gochuusaaniis himamaa jira.
Turtii aangoo waggaa 22 booda biyyatti gadi lakkisanii bahuusaanif wanti jedhan akka hinjirrees ibsameera.
Mr. Jaameen qabxii filannichaa diduun humnaan aangoorra turuuf fedhi qaban ibsanis, jaarsuummaa aanga'oota biyyootaa ollaan taa'amee fi dhibbaa gidduu seentuumaa waraanaan irra gaheen sodaachuun biyyatti yeroo dhumaaf sokkani jiru.
Pireezidaantii haaraa tahanii Seenegaalitti kakuu kan raawwatan Mr Adaamaa Baaroon,yoom gara biyyaatti akka deebi'an wanti ibsamee akka hin jirree dha BBCn kan gabaase.
Dilbata irraa eegalee looltoonni biyyoota dhiha Afrikaa,magaalaa guddditti Gambiyaa, Baanjuul,dhaquun pireezidaanti Adaamaa Baaroof